Izicwangciso ezinkulu zoMphathiswa Wezokhenketho waseJamaica e-UK naseMbindi Mpuma
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » Izicwangciso ezinkulu zoMphathiswa Wezokhenketho waseJamaica e-UK naseMbindi Mpuma
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • abantu • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Inkokeli yezokhenketho kwihlabathi liphela ene-ajenda yaseJamaica eshiye i-UK kunye ne-Middle East. Unesicwangciso esikhulu, i-ajenda enkulu, kunye namaphupha amakhulu okwenyani.
Ukulandela ukuthengisa okuphumeleleyo kwiNtengiso yeNtengiso eMntla Melika, Umphathiswa Wezokhenketho, Mhlonishwa. U-Edmund Bartlett ushiye esi siqithi izolo, ephelekwa liqela elikwinqanaba eliphezulu ukuya kuphonononga amathuba otyalo-mali kunye nexilongo lokhenketho lokuya eJamaica ukusuka e-United Kingdom (UK) nase-Middle East.
Phambi kokumka kwakhe, uMphathiswa uBartlett uthe, “Njengokuba sifuna ukukhawulezisa ukubuyisela ishishini lezokhenketho, ndiza kube ndikhokela igqiza eliza kuya e-United Arab Emirates (UAE), Saudi Arabia nase-United Kingdom. Ukuphonononga amathuba otyalo-mali oluthe ngqo lwangaphandle (FDI) kwicandelo lethu lezokhenketho kunye nokuqinisa ukufika kwabo basuka kwintengiso yethu yesithathu ngobukhulu. ”
Uthe utyalomali luzakudlala indima ebalulekileyo ekuvuseleleni ukhenketho ngokubonelela ngemali eyimfuneko ekwakheni nasekuphuculeni iiprojekthi ezibalulekileyo kuphuhliso nasekukhuleni kwamandla ezokhenketho.
I-blitz iqala ngokujolisa imakethi yokuhamba kwi-Dubai World Expo 2020 e-United Arab Emirates. Jameyikha ungomnye wababonisi abangaphezu kwe-190 kwi-expo kunye ne-pavilion eqaqambisa iimveliso zakutshanje kunye nezinto ezintsha phantsi komxholo othi "iJamaica iyenza ukuba ihambe", idibanisa umhlaba ngomculo wayo owahlukileyo, ukutya, imidlalo, kunye neminye imiba yelifa layo elityebileyo.
Ngelixa e-UAE, uMphathiswa kunye neqela lakhe baya kudibana neGunya lezoKhenketho eli lizwe ukuxoxa ngentsebenziswano kutyalomali lokhenketho kulo mmandla; Amalinge okhenketho kuMbindi Mpuma; kunye nokungena kwamasango eMntla Afrika nase-Asiya, kunye nokuququzelelwa komoya. Kwakhona, kuya kubakho iintlanganiso kunye nabaphathi be-DNATA Tours, oyena mqhubi mkhulu wabakhenkethi kwi-UAE; amalungu eDaaspora yaseJamaican kwi-UAE; kunye neenqwelomoya ezinkulu ezintathu eMbindi Mpuma- e-Emirates, eItiad naseQatar.
Ukusuka e-UAE, uMphathiswa u-Bartlett uya e-Riyadh, e-Saudi Arabia, apho aya kuthetha khona e-5th Isikhumbuzo seLinge loTyalo-mali lwexesha elizayo (FII). I-FII yalo nyaka iza kubandakanya iincoko ezinzulu malunga namathuba amatsha otyalo-mali kwihlabathi liphela, uhlalutyo lweendlela zeshishini, kunye nothungelwano olungenakuthelekiswa nanto phakathi kwee-CEO, iinkokheli zehlabathi kunye neengcali. Uya kudityaniswa neSenethi i-Hon. Aubyn Hill kwisikhundla sakhe njengoMphathiswa ngaphandle kwePotifoliyo kwi-Ofisi yoPhuhliso loQoqosho kunye nokuDalwa kwemiSebenzi (i-MEGJC), noxanduva lwaManzi, uMhlaba, ukuThengwa kweNkqubo yoShishino (i-BPOs), iGunya loQoqosho loKhethekileyo laseJamaica kunye neeprojekthi ezizodwa.
Ukuphakanyiswa kwakutsha nje kweengcebiso zikaRhulumente wase-UK ngokuchasene nazo zonke izinto ezingafunekiyo zokuya eJamaica kuvule indlela yokuba uMphathiswa uBartlett akhokele iqela elikwinqanaba eliphezulu ukuya eLondon, nge-30 ka-Okthobha ukuya kweye-6 kuNovemba, ejolise kwimakethi yase-UK. Ukubandakanyeka kwabachaphazelekayo kuya kubanjwa neVirgin Atlantic, iQonga lase China kunye neBritish Airways kwiWorld Travel Market yaseLondon (WTM), enye yeentlanganiso ezibaluleke kakhulu zonyaka kwicandelo lokuhamba lamazwe aphesheya.
Umphathiswa wezokhenketho uza kuba lundwendwe olukhethekileyo nge-9th Isidlo sangokuhlwa soMbutho woKhenketho wePasifiki Asia. Ukuqhubeka noxanduva lwakhe lwamanye amazwe, uzakuthatha inxaxheba kwi-UN World Tourism Organisation, World Travel and Tourism Council nakwiNgqungquthela yaBaphathiswa be-WTM.
Uluhlu oluqulathe izinto luquka udliwanondlebe namajelo eendaba, ukuthetha kwiintlanganiso zeCity Nation Place Global eLondon, intlanganiso yebhodi yeGlobal Tourism Resilience and Crisis Management Centre (GTRCMC), kunye nentlanganiso nabantu baseJamaican Diaspora e-UK.